Bit By Bit - အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း Creating - 5.5.5 ကျင့်ဝတ် Be
ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ဖို့တိုကျတှနျးနှိုးဆျောဒီစာအုပျမှာဖော်ပြထားတဲ့အပေါငျးတို့သသုတေသနသက်ဆိုင်သည်။ အခနျးမှာကျင့်ဝတ်-ဆှေးနှေးခဲ့၏ပိုပြီးယေဘုယျဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပြင် 6-အချို့တိကျသောလူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းစီမံကိန်းများအတွက်၏အမှု၌ပေါ်ထွန်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းလူမှုရေးသုတေသနမှဒါအသစ်ဖြစ်၏ကတည်းကဒီပြဿနာတွေကိုပထမဦးဆုံးမှာအပြည့်အဝသိသာမဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အားလုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းစီမံကိန်းများတွင်, လျော်ကြေးများနှင့်ချေးငွေကိစ္စများရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့လူများကသိက္ခာမဲ့လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ Netflix နဲ့ Prize ကိုပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်နောက်ဆုံးမှာအဘယ်သူမျှမလျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိကြောင်းစဉ်းစားပါ။ အလားတူပင်အချို့သောလူများကသိက္ခာမဲ့ microtask အလုပ်သမားစျေးကွက်အပေါ်အလုပ်သမားများကိုပိုက်ဆံအလွန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏသာပေးချေရန်စဉ်းစားပါ။ လျော်ကြေးဤကိစ္စများအပြင်, အကြွေး၏ related ကိစ္စများရှိပါသည်။ တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. အားလုံးသင်တန်းသားများကိုနောက်ဆုံးသိပ္ပံနည်းကျစာတမ်းများ၏စာရေးဆရာများဖြစ်သင့်သလော ကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများကိုကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုယူပါ။ တချို့ကစီမံကိန်းများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း၌ရှိသမျှသောအဖွဲ့ဝင်များမှရေးသားခဲ့သောအကြွေးပေး, ဥပမာအားဖြင့်ပထမဦးဆုံး Foldit စက္ကူ၏နောက်ဆုံးရေးသားသူ "Foldit ကစားသမား" ဖြစ်ခဲ့သည် (Cooper et al. 2010) ။ စီမံကိန်းများက Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံမိသားစုများတွင်အလွန်အမင်းတက်ကြွခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောမျှဝေသူတစ်ခါတစ်ရံစာတမ်းများအပေါ် coauthors ဖြစ်ရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အိုင်ဗင် Terentev နှင့်တိ Matorny နှစ်ခုရေဒီယိုက Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံသင်တန်းသားများကို, ထိုစီမံကိန်းကိုမှထသောစာတမ်းများ၏တဦးတည်းအပေါ် coauthors ခဲ့ကြသည် (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) ။ တခါတရံမှာစီမံကိန်းများကိုမျှသာ Co-ရေးသားခဲ့သောမပါဘဲပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတျပွု။ coauthorship အကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်များသိသာကိစ္စတွင်ထံမှကိစ္စတွင်မှကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။
ပွင့်လင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းခြင်းလည်းသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် privacy နှင့် ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးမေးခွန်းများကိုမြှင့်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, Netflix ဟာလူတိုင်းဖောက်သည်ရုပ်ရှင် ratings ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင် ratings အထိခိုက်မခံပေါ်လာမပြုစေခြင်းငှါသော်လည်း, သူတို့သည်, ဖောက်သည်များအများပြည်သူစေရန်သဘောတူမပြုခဲ့ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဖောက်သည် '' နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြိုက်များကိုသို့မဟုတ်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သည်။ Netflix ဟာအဆိုပါ ratings ဆိုတိကျတဲ့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဆက်စပ်မရနိုင်ပေမယ့်ကိုယ့်ပတ် Netflix ဟာအချက်အလက်များ၏လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Arvind Narayanan နှင့်ဗီ Shmatikov အားဖြင့် re-ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် data ကိုဖျောက်ပေးသည်ကြိုးစားခဲ့ (2008) (အခန်း6ကိုကြည့်ပါ) ။ ထို့ပြင်ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းခြင်းအတွက်, သုတေသီများ၎င်းတို့၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲလူတွေအကြောင်းကိုဒေတာစုဆောင်းနိုင်ဘူး။ ဥပမာ, မာလာဝီဂျာနယ်များစီမံကိန်းများအတွက်တစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ခေါင်းစဉ် (အေအိုင်ဒီအက်စ်) အကြောင်းစကားစမြည်သင်တန်းသားများ၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲကူးရေးသောခဲ့ကြသည်။ ဒီလိုကျင့်ဝတ်ပြဿနာများ၏အဘယ်သူမျှမကျော်လွှားသော်လည်း, သူတို့တစ်တွေသည်စီမံကိန်းများ၏ဒီဇိုင်းကိုအဆင့်ဆင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ကိုသတိရပါ, သင့် "လူအစုအဝေး" လူမျိုး၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။